တစ်လ ၁၀ သိန်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆီကြိတ်စက် ဂယက်နှင့် ကိုယ်တိုင် မွဲဆေးဖော်မိခြင်း – CharTake
တစ်လ ၁၀ သိန်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆီကြိတ်စက် ဂယက်နှင့် ကိုယ်တိုင် မွဲဆေးဖော်မိခြင်း
chartake | December 4, 2020 | Local Knowledge | No Comments
တစ်လ ၁၀ သိန်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆီကြိတ်စက် သတင်းလေး အ တော်ကို ဟိုးလေး တကျော်ကျော် ဖြစ်နေလို့ စမ်းကြည့် မိပါတယ်။ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဆီကြိတ်စက် လောကမှာ နှစ်အတန်ကြာ မိဘ လက်ငုတ် လုပ်ခဲ့ ဖူးတာကိုး။ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်၂ မောင် ရွှေရိုးလမ်း အမှတ် ၁၂၅ မှာ ကိုယ်ပိုင်အုန်းဆီစက်ရုံဗျ။
ခုတော့ဆီဖြူအရောတွေ ခေတ်ဆန်းကုန်လို့ ကြိတ်တာထက် ငှါစားရတာတောင် ပိုကိုက်နေတာကြောင့် လုပ်ငန်းပြောင်းခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဝါသနာက မစွန့်နိုင်သေးဘူးကိုး။ အုန်းသီးဖတ် အသား ၁၇ ပိဿာ ကြိတ်ရင် အုန်းဆီအသန့် ၁၀ ပိဿာ ရတယ်။ ဝက်စာ ငါးစာကျွေးဖို့ အုန်းဖတ်က ၅ ပိဿာကျော် ရတယ်။ ၂ ပိဿာလောက်က အလေအလွင့်ပဲ။ ဒါက ဆီထွက်အများဆုံး အသီးမို့လို့။ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာတို့ဆို ဒီထက် ပိုနည်းသေး။
တပိုင် တနိုင် ဆီကြိတ် စက်လေး စိန့်တိုင်းကနေ မှာလိုက်ပါတယ်။1050 ယွမ် ( မြန်မာငွေ ၂သိန်း ၁ သောင်း ) ကားခ တန်ဆာခ ၂ သောင်းလောက် ကျသေးတယ်။ မြေပဲအနီ ၅ ပိဿာ ဝယ်တယ် ။ ၃၅၀၀ × ၅ ကြိတ်လိုက်တာ ၂ နာရီကျော် ကြာတယ်။
ဆီ ၁ ပိဿာ ၈၅ ကျပ်သား ထွက်တယ်။ တကယ်တမ်း မြေပဲအဖြူဆို ပိုထွက်တယ်။ အများဈေး လှမ်းမေးတော့ ပိဿာ ၁၀၀အထက် ၂၈၅၀ တဲ့။ 2850 ×5= 14250
ဆီက ၂ ပိဿာခွဲ ပိုပိုသာသာ တွက်အုံး ။ တပိဿာ ၅၇၀၀ ကျမယ် ။မြေပဲဖတ်က ၁ ပိဿာ ၅၀၀ ထား ။၂ ပိဿာ မပြည့်တပြည့် ပြန်ရမယ်။ တွက်ရေးကတော့ စက်သူဌေးပေါ့။ ဈေးကွက်ထဲ လက်လီဝယ်မှ အညာ ဆုံဆီ ဆိုတာ ၁ ပိဿာ ၆၀၀၀ ၊ အများယူရင် ၅ ၂၀၀ … ဘယ်လို သွားရောင်းမလဲ။ သိုလှောင်ခ၊ အတိုးတွက် ၊ မြေနေရာ၊ မီတာခ၊ အလုပ်သမားခ၊ မြတ်မြတ်ရှုံးရှုံး လာကောက်မယ့်အခွန်၊ စက်ပြင်စားရိတ် ထည့်စဉ်းစားအုံး။
နှမ်းဆီလား ဒီထက်ပိုပြီး ဆီထွက်လျော့သေး ။ နေကြာဆီလား ။ ပိုဆိုးသေး။အခွံခွာစားရိတ် ပိုကုန်အုံးမယ်။ ဆီဖြူ ၁ ပိဿာ ၂၀၀၀စွန်းစွန်း ၁၀ ပိဿာဝယ် မြေပဲဆီအစစ် ၂ ပိဿာထည့် ဓာတုအနံ့ လေး ၁၀၀၀ ဖိုးလောက်အုပ် အားပါး … အစစ်ထက်တောင်မွှေးသေး
ဒီမှာကြည့် မြေပဲဆံ အစစ် ဒီလိုကြိတ်တယ်။ ဘာမှမရောဘူး။ဒါက ၇၀၀၀/၈၀၀၀ ရောင်းတယ်။ ဟိုက နောက်ကွယ် ဘာတွေရောမှန်းမသိ ယှဉ်ကြည့်တော့ ဓာတုတန်ခိုးနဲ့ အတုကတောင် ပိုမွှေးနေသေး။ ခင်ဗျား ဘုရားစူး ကျိန်ရောင်းလည်း မဝယ်ဘူး စိတ်ချ။ ပဲပြား ပဲသွေးတောင် ဖော်မလင်လေးပါမှ ခံတွင်းတွေ့တဲ့ဓလေ့က ကြီးစိုး နေပြီလေ။
စန္ဒီပရဆေး မိတ်ဆွေကြီး ဘာဘူ ဦးတင်မောင်ဆီက မုန်ညင်းစေ့အစစ် ၁၀ ပိဿာဝယ်တယ်။ 2500×10 မုန်ညင်းဆီပါ ၁ပိဿာ ဝယ်ခဲ့သေးတယ်။ 4500 တဲ့။ ၅နာရီလောက် ကြိတ်ရတယ်။ချိန်ကြည့်တော့ ၂ ပိဿာစွန်းစွန်းပဲ ရတယ်။ 25000÷2= 12500
အားပါး … ခူးပြီး ခပ်ပြီး အဆင်သင့်ကမှ 4500 ပဲ ကျတာလေ။ 8000 တောင်မှ ပိုကုန် သွားတာကိုး။စက်ညံ့လို့ ဒီလောက်ဘဲထွက်တာလို့တော့ မဆိုလေနဲ့။ ကြိတ်ဖတ်ကို ရေစိမ် အပေါ်ယံဝေ့တက်လာတဲ့ ဆီကိုပြန်ခပ် ထပ်ပေါင်းအုံး။ ၁၀ သား ထက်ပိုမထွက်ဘူး ။ ယာခင်းထဲထိ သွားဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့ ကြိတ်ရင်ရော ?
ဒီအချိုးနဲ့ တွက်ကြည့် မုန်ညင်းစေ့ ၁ ပိဿာ ၁၀၀၀လောက်ပဲကျမှ 4500 နဲ့ ရောင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ကာ … ဆီဖြူကို အုန်းဆီနဲ့ရော ဓာတုနံ့လေးအုပ်တော့ ဈေးပေါတယ်။နှစ်ရှည်ထားလည်းဆီချေးစော်မနံဘူး။ အစစ်က ၃ လကျော်ဆို အနံ့ပြောင်းပြီ ။ မိဘများက ရှေးရိုးစွဲ သမာသမတ်ပဲလုပ်မယ် ဆုံးဖြတ်ထားလေတော့ နောက်ဆုံးမှာဈေးမယှဉ်နိုင်လို့ လက်မြှောက်အရှုံးပေးခဲ့ရတာ ကိုယ်တွေ့ပါ။
ပဲဆီထဲရော အညာရနံ့လေး သင်းရဲ့လား ?ကလေးဗိုက်နာလို့ မုန်ညင်းဆီလူးတဲ့ထဲ မုန်ညင်းစေ့ထဲက ဓာတ်သတ္တိတွေ ဘယ်နှစ်ချိုး ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းများ ပါပါလိမ့်။ ? သို့နှင့် … ကိုယ်တိုင်စားသုံးဖို့ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ ကလေးတွေဆေးဝါးအတွက် မုန်ညင်းဆီ ဒီအတွက်လောက်ပဲ မှန်းပါတော့တယ်။
စီးပွားတွက်နဲ့ ကြိတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ အရောင်မရှိ အနံ့ မရှိတဲ့ ဈေးပေါပေါ ဆီဖြူ မရောအောင် ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် တားမြစ်နိုင်မယ့် ဥပဒေကိုသာ အရင်ဆုံး မျှော်လင့်ပါအုံးဗျာ။ ကျနော်ကတော့ မွဲဆေးဖော်မိခဲ့ပြီလေ။ ကိုယ့်လို မခံစားရလေအောင် စက်ရောင်းဖို့ အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်းပြီး ရှိတဲ့စက်ကိုလည်း သော့ခတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ မရောင်းတော့ပါ။ Crd ; ချမ်းမြေ့သစ္စာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာသာရှိသည့် ပုပ္ပားမျောက်မြီးရှည်မျိုးစိတ်သစ် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မှုမရှိစေရေး ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်နေ
နည်းပညာအကူအညီမပါပဲ ကျောက်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို လက်နဲ့သာထွင်းထုပုံဖော်ထားတဲ့ မုံရွှာမြို့မှရွှေဘတောင်
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် လူစုပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်မင်းသမီး ( သို့ ) လွတ်လပ်ရေး အောင်သန်းတင်